ipapashwe 12th EyeDwarha 2016 ngokuthi Mateyu Woodward & efayilini phantsi Bhangladeshi, eNgilani. uvuselelwe 13th EyeDwarha 2016 .
Ngxatsho eNgilani kwi uloyiso yobungcali ODI series nxamnye Bangladesh. Ii-Tigers zisenokungabonwa ngabo bonke njengabachasi abanzima kwaye iindwendwe ziya kujongana novavanyo olungqongqo- kodwa nayiphi na inkcaso yase-Asiya kumhlaba wasekhaya ayisiyiyo kodwa.
Ukuphumelela namhlanje kwibala elinzima kubonise ukukhula kwiqela elisakhulayo nelisaphuhlayo- indlela yokuqhekeza kunye nokubamba kuncitshisiwe kwesi sihlandlo - nditsho noJos Butter wakwazi ukuphatha kancinci kancinci kunebhola yebhola yakhe. Ubukrelekrele, umonde kunye luvo wabona ekhaya kwicala.
Uluhlu olomeleleyo lokubetha phezulu luya kuhlala lufumana iiplaudits kodwa i-bowling nayo yaqeqeshwa kwaye u-Adil Rashid ukhula ngokukhawuleza abe ngomnye wabadlali abakhokelayo be-overs abanomda.. Any bowl­ing attack that can leave out Dav­id Wil­ley is one blessed with quality.
Nangona ndizihlonela izigqibo ezenziwe ngu-Alex Hales kunye no-Eoin Morgan ukuhlala olu tyelelo ngaphandle abanakulindela ukuba babuyele ngqo kwicala. UBen Duckett ungene kwaye wasa kwiqakamba yamazwe aphesheya njenge… dada ukuya… kakuhle ufumana okunye!
Kuhle ukubona ukuba uBen Stokes ubuyile ecaleni kwakhona - uzisa ibhalansi kwiqela, ukungena ngokubaleka okuninzi (ubone ngempumelelo iNgilane ekhaya namhlanje) and rel­at­ively eco­nom­ic­al bowl­ing figures.
Lilonke ndicinga ukuba kukho amaxesha amnandi apha kunye nokuza kwicala laseNgilane- banetalente eninzi elinde emaphikweni.
Elinye icala hayi babephatheke kakuhle - ibe buhlungu kum ukuba ndithi kuyo (ukhohlokhohlo olutsho) yi-Australia. Babenako nje wena yabo uyazi Sayontoni sasekhohlo kubo nguMzantsi Afrika, iiProteas ziwenze mhlophe 5-0. UMzantsi Afrika ujongeke kakuhle okwangoku
500 kunye? Mhlawumbi Lo woNyaka